The Emotional Environment [Dareenka ama Caadifadda Bay’adda Caruurta Laguhayyo]
Maqaalkaan labaad wuxuu qaadaa dhigayaa dareenka iyo caadifadda jawiigga ilmaha lagu hayyo saamaynta ay ku leedahay dabeecadaha curuurta. Qaabaynta iyo habeeynta bay’adda ilmahay lagu hayyo si ay caruurtu guul ugaaraan ayaa waxay tahay qodob muhiim ah oo tixgelin mudan.
The Physical Environment [Bay’adda Caruurta Laguhayyo]
Maqaalkaan wuxuu sharaxaad iyo tusaale kabixinayaa sida bay’adda cunuga lagu hayyo, qorshaha iyo jadwalka waxbarashada iyo caadada meesha kajirta, sida ay saamaynta baaxadda leh ay ugu leedahay sida caruurta ay u dhaqmayso ama dabeecadaha ubadka yaryar.
I’m Mad, I’m Sad: Helping Children with an Emotional Vocabulary [Waan xanaaqsanahay, waan caraysnahay: Sida caruurta loo baro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan]
Caruurta waxaa marar badan layiraahdaa “afka kahadla” si ay arintaa ugu guulaystaan waxy ubaahanyihiin in labaro ereyada dareenkooda laxiriira. Macalimiintaan siyaabo badan ayeey caruurta ereyada ugu kobcin karaan ayagoo u aqrinaya buugta, tusaalayn siinaya iyo siyaabo kale oo kacaawin kara caruurta in ay kufiicnaadaan sida dadka looladhaqmo dabeecadaha adag nah ay kafogaadaan.
Topics: Child development, Inclusion, Special needs
Topics: Child development, Inclusion